Maitiro ekuchengeta yako Hutano data kana uchichinja iPhone | Ndinobva mac
Maitiro ekuchengeta yako Hutano data kana uchichinja iPhone
Yakafananidzwa | | iPhone, Zvimwe Zvirongwa zveMac
With the kuswedera kusvika Del iPhone 6s vashandisi vazhinji vanozochinja zviteshi. Nhanho inonzwisisika ichave iPhone 4 o 5s kune iyo modhi nyowani, asi isu tinoziva kwazvo kuti vazhinji vedu vane iyo 6, tine chokwadi chekuchinja. Ndizvo zvaunazvo apuro... Chokwadi ndechekuti neiyo Hutano app data rako rakanyorwa mune terminal pachayo. Ramba wakatarisana uye ipapo tichakudzidzisa chengeta data rehutano kana uchichinja iPhone, kana iwe usiri kuda kudzorera izere kopi kubva pakombuta yako.
Chinokosha chiri muQS Access uye Health Importer
Kiyi yeku chengetedza hutano data kana uchichinja iPhone iri mukushandisa QS Kuwana, iyo ichaendesa kunze data kuti igone kuendesa kunze zvakare uye zvemahara. Hypertext chi @ s vakamboishandisa uye zvinoita kunge iri kushanda nemazvo. Matanho ekutevera ndeaya:
Kana isu tavhura application, isu tichaudzwa kubva kune ipi app yatiri kuda kutumira iyo data. Tichasarudza iyo Hutano app uye kana isu tine yakawanda data yakachengetwa mairi, uye isu tinoda chengetedza Hutano data kana uchichinja iPhone zvirinani kuenda zvishoma nezvishoma, kubvira QS Kuwana inopa iyo sarudzo.
Zvino kana tangobvumidza iko kunyorera kuti uwane iyo Hutano data, isu tinoratidzwa tafura mu CSV fomati uye isu tinogona kungoigovana chete, kuburikidza neyemamiriro ezvinhu menyu, neDropbox kana kutumira kopi kuburikidza ne Tsamba yemapurogiramu.
Isu tatova nedata rakatumirwa kunze uye isu tatova nezvishoma kune chengetedza hutano data kana uchichinja iPhone. Iye zvino unongofanirwa kuendesa iyo yese data ku yedu nyowani iPhone. Kuti tiite izvi tinofanirwa kurodha pasi imwe app inonzi Hutano Importer Uye kunyangwe isiri yemahara (€ 3) ichauya ichibatsira pane izvo zvatinoda kuwana.
Tichavhura iyo faira yakachengetwa muDropbox kana kutumirwa neemail pamwe ne Hutano Importer app.
Kana tangopinza dhata, isu tinofanirwa kugovera yega yega dhata iyo data yainoreva.
Isu tinongofanirwa kupa mvumo yeapp uye eureka! tichava takwanisa chengetedza Hutano data kana uchichinja iPhone.
Kuti ndiite rwendo rwese urwu ndinokurudzira kusafunga nezve chero chinhu kunze kwekugutsikana kwekuwana chengetedza Hutano data kana uchinja iPhone, nekuti kana ini ndikatanga kufunga izvozvo mushure mekushandisa mari yakawanda pane iyo nyowani iPhoneChero zvarinodaidzwa, pamusoro peizvozvo ndinofanira kutengesa / kupinza ... misodzi inouya mumaziso angu, asi kwete nemufaro kana zvisiri ne ...
SOURCE | Hypertextual
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » iPhone » Maitiro ekuchengeta yako Hutano data kana uchichinja iPhone
Nyowani yeruzhinji beta yeParagon Hard Disk Manager yeMac
Pakati-pasi: Mumvuri weMordor Mutambo weGore Rekutsikisa, ikozvino yawanikwa yeMac